कसरी तिब्बती नेतृत्वले प्रायोजकलाई व्यवहार गर्दछन् (जिन्दक) | छेम रिन्पोछे
मेरो पहिलो बिहानीमा त्यहाँ गादेन सहारत्से गुम्बाका सबै भिक्षुहरू लामा चोपा गर्दे। हामीले भिक्षुहरूका लागि दानको उत्तरदायीत्व लियौँ।
अधिकांश मान्छेहरूले बोल्न अलिक असहज मान्ने विषय भनेको धर्ममा प्रायोजन गर्नु हो। मान्छेहरूले यसलाई असहज मान्छन् किनभने उनीहरू सोच्छन् कि पैसाको बारेमा छलफल गर्नु आध्यात्मिक कुरा होइन। यद्यपी यो एक अपरिहार्य विषय हो किनभने यो सांसारिक जीवनको साधारण वास्तविकता हो- मठहरू र धार्मिक संस्थाहरू प्रायोजकको उदारता र कोष (धन) बिना संचालन हुन सक्दैन। वास्तवमा, बुद्ध आफैंको समयमा पनि प्रायोजन विषय सम्बोधन गरिएको थियो। मगडा साङ्मो र तिनका पिता सुड्डाटा जस्तै उहाँका चेलाहरूको उदाहरणले हामीलाई प्रायोजनको सही मनोवृत्तिको पाठ सिकाउँछ र हामी सिक्छौं कि कसरी प्रायोजन आध्यात्मिक अभ्यास हुन सक्छ। प्राप्तकर्ताको दृष्टिकोणबाट पनि त्यहाँ प्रायोजन छ, जुन म यहाँ कसरी धर्मशाला र तिब्बतीयन नेतृत्वले उनीहरूको प्रायोजकहरूलाई अस्वस्थ प्रकारले व्यवहार गर्दछन् भन्ने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्देछु।
त्यसैले बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्दै गरेका ती व्यक्तिहरूका लागि, एक वा अर्को बिन्दुमा , तिनीहरूले प्रायोजनको विषयसँग प्रत्यक्ष हुनैपर्छ। तसर्थ प्रायोजन त्यो चीज हो जसको बारे म ११ वर्षको उमेर देखि नै ज्ञात थिएँ, जब मेरो सम्बन्ध धर्ममा मेरो परिवारबाट शुरू भयो। त्यस समयदेखि गत १९ वर्षसम्म हामी केचारा र भारतमा रहेका मठहरू दुवैका लागि प्रायोजक रहदै आएका छौँ।
म, बायाँपट्टी तल, चश्माका साथ क्यामेरामा हेर्दै। बाल्यअवस्थामा हामी सबैसँग (रिन्पोछे र मेरो परिवार) निकै थोरै व्यक्तिगत धन थियो। हामीसँग धर्म केन्द्र बनाउनको लागि पनि प्रयाप्त रकम थिएन, त्यसैकारणले रिन्पोछेले घर घरमा गएर धर्म शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उठाइएको रकमको केही भाग मठहरूको जस्तो सुकै अनुरोधको लागि सधैँ पुन: निर्देशित गरिन्थ्यो। ती मठहरू जसका लागि हामीले प्रायोजन उठाएका थियौँ आज हामीलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको छ।
म मेरो बाल्यकाल र युवाअवस्थाका सबै वर्षहरूको बारेमा सम्झना गर्छु, जुन बेला अनगिन्ती भोज र कार्यक्रमहरू, भारतमा रहेको मठहरूको लागि रकम जुटाउनको लागि आयोजित गरिएको हुन्थ्यो। एक समयमा हामी सबै सन् १९९७ को आर्थिक दुर्घटनाको कारण धेरै मारमा परेका थियौँ तर हामीले कहिले पनि मठहरूलाई प्रायोजन गर्न बन्द गरेनौँ। मलाई याद छ कि भरपूर मात्रामा सन्देशहरू पठाइएको थियो, हामीलाई अनुरोध गर्दै कि कुनै भिक्षुको औषधीको लागि वा किताब वा पोशाकहरूको प्रायोजकका लागि। मलाई याद छ कि भैँसी वा गाई वा निर्माण सामाग्रीहरू र मेडिकल उपकरण किन्नको निमित्त चाहीँने रकमको लागि प्रायोजनको अनुरोध गारिएको । मलाई सम्झना छ मूर्तिको साथ साथै चित्रकारीको भेट र मठको मूर्तिहरूको लागि आभूषण दान गर्न धेरै धेरै अवसरहरू आएका थियो।
सबभन्दा धेरै, म रिन्पोछे र मठद्वारा हामीलाई हाम्रो प्रायोजनको सदुपयोग कसरीइभईरहेको छ भन्ने जानकारी प्राय: सम्झन्छु। यो गाई जुन तपाईंको दानले प्रायोजन गरेको हो, यो कोठा तपाईंले दान गर्नुभएको पैसाले पुन: रंगरोगन गरिएको हो,धन्यवाद तपाईंको दानलाई, यिनीहरू भिक्षुहरूलाई प्रदान गरिएको पोशाक हुन्, यी मूर्तिहरू बनाइएका र यी मूर्तिहरू अहिले रंगरोगन गरिएका हुन्। यो गादेन लाछि (मुख्य प्रार्थना कक्ष) को पुरानो फर्श जुन खनिदैछ, यो चाहीँ छानिएको नयाँ फर्श र यिनीहरू चाहीँ सो कामको लागि नियुक्त गरेका ठेकेदारहरू हुन्। र यहाँ नयाँ फर्श वितरण गरिदै…यस्तै र थप अरू ।
गादेन सहारत्से साब्तेन खाङ्ग (पुजा घर), उत्तरी भारतमा अवस्थित धर्मशालाको लागि दान उठाउँदै । मिति ध्यान दिनुहोस्, जुन दोर्जे शुग्देन प्रतिबन्ध चरम बिन्दुमा हुनु दुई वर्षअघि हो। के उठेको रकम प्रायोजकलाई फिर्ता हुन्छ त? मलाई लाग्दैन हुनेछ भनेर…
बितेका वर्षहरूमा म राम्ररी भन्न सक्छु कि रिन्पोछेसँगै, हामीले भारतको तिब्बतीयन बौद्ध मठहरूलाई लाखौँ रूपैयाँ प्रायोजन गरेका छौँ। तपाईंलाई लाग्ला कि यति वर्षपछि म यो बारे किन लेख्दै छु? एक प्रायोजकको (जिन्दक) रूपमा म सिर्फ मेरो लामा, परिवार र मलाई दोर्जे शुग्देन विवादको समयमा, धर्मशालाद्वारा प्रेरित शुग्देन विरोधी गुटले गरेको व्यवहार बारे व्यक्त गर्न चाहन्छु।
तपाईंलाई थाहा छ, गत १९ वर्षमा, मेरो परिवार र म तिब्बती मठहरूका लागि प्रायोजक (जिन्दक) भएका थियौँ। हामीले यो सबै व्यक्तिगत रूपमा र रिन्पोछेको माध्यमबाट, केचारा संगठन मार्फत सकेको जति रकम उठाएर सहयोग गरेका थियौँ। हामीले यो सबै गर्‍यौं किनभने हामीले विश्वास गर्थ्यौँ कि मठहरलाई यसको साँच्चै नै आवश्यकता थियो र हामीलाई सिकाइएको थियो कि तीन रत्नमध्ये कुनै एकको लागि मात्र पनि दान गर्‍यौं भने यो एकदमै प्रशंसनीय काम हुने (हामी अझै पनि यसमा विश्वास गछौँ) ।
गादेन सहारत्से मठका सबै भिक्षुहरूलाई दान दिँदै । मेरो लामा परिवार र मैले पछिल्लो २० वर्षदेखि यो कार्य गर्दै आएका छौँ। दुर्भाग्यवश, अब हामीलाई मठमा फर्किने अनुमति छैन, किनभने हामी दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्दछौं र संघ समुदायको लागि लाखौँ रकम उठाएता पनि पनि नराम्रो व्यवहार खेप्दै आएका छौँ।
व्यक्तिगत क्षमतामा, म प्रायोजक (जिन्दक), मात्र धनले होइन तर समय र मेहनतले पनि हुँ। वास्तवमा यो कुरा भन्न गलत हुनेछ कि म तिब्बतीयन समुदायबाट अपरिचित छु। ईमानदारीका साथ भन्नुपर्दा भारत कहिले पनि मैले यात्रा गर्न रूचाएको ठाउँ थिएनँ। एक निजी ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयमा पढेको हुदाँ, म पश्चिमेली धारणासँगै हुर्किएँ। तर सन् २००४ मा रिन्पोछेले मलाई पहिलो पटक भारत यात्रा गर्न आग्रह गर्नुभयो, त्यो र त्यसपछिका यात्राहरूले मेरो सम्पूर्ण संसार परिवर्तन गरी दियो।
म भारतमा अन्तिम पटक सन् २००५ को प्रारम्भमा थिएँ, तीन वर्षअघि जब प्रतिबन्ध चरम सीमामा पुगेको थियो। यो समयमा गादेन सहारत्से मठ एउटै थियो र विभाजित भएको थिएन। किनभने त्यो समयमा तुलनात्मक हिसाबले शान्ति कायम नै थियो, मैले सेरा मे मठ, जोङ्कार छोईदे मठ र ग्यामेद तान्त्रिक कलेज भ्रमण गर्न पाएको थिएँ। यी सबै ठाउँहरू अब मेरो सीमाबाट बाहिर छन् किनकी म दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्दछु।
सन् २००४/२००५ को जाडोमा गादेन सहारत्से मठ घुम्न पाउनु मेरो लागि ठूलो भाग्य थियो, प्रतिबन्ध चरम सीमामा पुग्नुभन्दा र मठहरू बाध्यताका कारण विभाजन हुनु अघि ।
तर यो सन् २००५ को तीर्थयात्रा, मैले यात्रा गरेको अन्यहरूमध्ये, बौद्ध धर्मप्रतिको मेरो सम्बन्ध र विश्वास अझ प्रगाढ बनायो। तीर्थयात्रामा मठपछि मठहरूको भ्रमणले मेरो दिमागमा केही छाप छोडेकोछ र मैले महशुस गरेँ कि यी समुद्री टापुहरूमध्ये यो नै मेरो लागि परिचित र सहज छ। यसकारण यही यात्रामा मैले भिक्षुणी बन्न आग्रह गरे।
मैले तिब्बतीयन संस्कृतिको धेरै अर्थहरू नजानेता पनि मेरो सधैँ तिब्बतप्रति भावपूर्ण दृष्टिकोण रहदै आएकोछ। त्यसैले यद्यपि म यसबारे अहिले धेरै कुरा गर्दिनँ, मानिसहरू जो म सँग नजिक छन् उनीहरूलाई ज्ञात छ कि धेरै अघिदेखि जबसम्म म बेलायतमा बस्थें, मैले तिब्बती कारणको लागि अभियान चलाएँ। मैले त्यस्तो विरोधमा नजान सल्लाह पाएता पनि म लुकीछिपी विरोधमा सामेल हुन्थे किनभने मलाई लाग्छ तिब्बतीयन बौद्ध धर्मावलम्बीको रूपमा यो तिब्बती जनताको लागि बोल्ने मेरो कर्तव्य थियो।
आजकल, एक अभियानकर्ताको रूपमा मेरो समयको बारे म कुरा गर्दिनँ किनभने यो एकदमै दु:खदायी छ। एकतर्फ, म तिब्बतीयन जनताहरूप्रति देखाइएको अन्यायको विरूद्धमा छु। अर्कोतर्फ, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ताको रूपमा मलाई दोर्जे शुग्देन विरोधी तिब्बतीयन समुदायहरूले रद्दी सरह व्यवहार गर्छन्।
रिन्पोछे र मलाई तिब्बतीयनहरूबीच वी च्याटमा कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने धेरै उदाहरणमध्ये एक। मानिसहरू मेरो सामाजिक सञ्जालमा रहेको खातामा जान्छन् र मलाई पादरी बनाइएको मेरो पुरानो चित्रहरू लिन्छन्, र केही प्रकारका अनुचित असर गर्ने कोलाजहरू सिर्जना गर्छन्। के तिब्बतीयन नेतृत्वले आफ्ना समुदायहरूलाई प्रायोजकहरूप्रति यस्तै व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छन्?
मेरो विश्वासको लागि अनलाइनमा म अपमानित र सताइएकोछु, केही मात्रामा तिब्बतीयन समुदायभित्र रहेका मेरा साथीहरूले भनेका छन् कि मेरो विश्वासको कारण म सँग टाढिने छन्। मलाई भनिएको छ कि मेरो लामाले मलाई धोका दिईरहेका छन् र उनी ठग हुन् जसले मलाई मूर्ख बनाइरहेका छन्। मेरो र मेरा गुरूबीच अनुचितता छ भन्ने देखाउन मेरो तस्बिरहरूलाई फोटोसप गरिएकोछ। मलाई अपमानित गर्ने प्रयास गरिएको छ, नराम्रो नामले बोलाउँछन् र मेरो धारणालाई बु***ट भनी अपमान गरिन्छ। वी च्याटमा जब म पोष्टहरू गर्छु, मैले धेरै यस्ता विष्ठा, मैथुन, बन्दुकहरू, चुप्पीहरू र अन्य त्यस्तै अपमानजनक कुराहरूको सामना गर्नु पर्दछु जसले मेरो लामा र मैले विश्वास गर्ने कुरालाई निन्दा गर्न मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन्।
यसले मलाई सोच्न बाध्य पार्दछ कि यो नै तिब्बती समुदायको वास्तविक स्वभाव हो, जुन समुदायको लागि मैले आवाज उठाएको थिएँ। के मैले त्यस्तो समुदायको अधिकारको लागि वर्षौँ लडे जसले आफ्नै समर्थकहरूलाई पछाडिबाट प्रहार गर्छ? तर फेरि, किन म विदेशीको रूपमा आश्चर्यचकित हुनुपर्यो र कि मलाई यस्तो व्यवहार गर्छन् भनेर, जब कि शुग्देन विरोधी तिब्बतीयनहरू आफ्नै समुदायका मानिसहरूलाई उनीहरूको विश्वासको आधारमा आक्रमण गर्न सक्षम छन् भने?
के मेरो वर्षौदेखिको उनीहरूप्रतिको समर्थनको अब कुनै अर्थ रहेन त? लाखौं रूपैयाँ मैले तिब्बती मठहरूलाई बाँड्नको लागि उठाउन मद्दत गरेको के अब त्यसको कुनै अर्थ रहेन त? के तिब्बतीयन नेतृत्वले आफ्ना समुदायहरूलाई प्रायोजकहरूप्रति(जिन्दक) यस्तै व्यवहार गर्न उत्प्रेरित गर्दछन्? जब कि म खराब दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता मानिन्छु जसलाई आफैंले पैसा उठाई मद्दत गरेको मठमा स्वागत छैन, के मैले गरेका सहयोग रकमहरू मलाई र मेरा प्रियजनहरूलाई फिर्ता आउँछ? निसन्देह, यदि म खराब छु भने मेरो पैसा पनि त खराब होला नि। आखिरमा, दाता नै खराब भएपछि किन उसको पैसा सफा हुन्थ्यो र? मेरो अनुभव,म मा मात्र सीमित छैन। हृदयस्पर्शीरूपमा, घेसे शोपा-लामाले मलाई एकपटक भन्नुभएको थियो कि उहाँको विश्वासको कारणले गर्दा उहाँ आफैंले बनाउन मद्दत गर्नुभएको मठमा उहाँलाई पाईला टेक्न पनि दिईदैन र उहाँको ती शब्दहरू मैले अझै पनि भुलेको छैन।
वास्तवमा, घेसे शोपा मात्र त्यस्तो नराम्रो व्यवहारमा परेका होइनन्, त्यही पनि उहाँले आफ्नो जीवन मठहरूको लागि समर्पित गरेका छन्। अनगिन्ती अरू लामाहरू र शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूले सयौँ हजार नत्र लाखौँ लाख रकमहरू मठहरूको लागि दान गरेका छन् जुन मठहरूमा उनीहरूलाई सम्बन्ध जोड्न दिइएको छैन। ग्याङशेन रिन्पोछे उदाहरणका लागि, सेरा-मे मठका एक ठूला उपकारकर्ता थिए जब सम्म दोर्जे शुग्देनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन। श्याङ्गपा खाङ्गशेनको भवनहरू,प्रार्थना हल र भिक्षुहरूलाई कोठाहरू उहाँकै मद्दतबाट सम्भव भएको थियो। प्रतिबन्धपछि, ग्याङशेन रिन्पोछे व्यवस्थित रूपमा तिब्बती नेतृत्वद्वारा अपमानित भएका थिए जसले उहाँलाई निन्दा गर्न समर्पित पेज बनाइएको थियो।
अर्का शुग्देन लामा, केन्सुर लोब्साङ्ग थार्चिन, सेरा-मेका भिक्षुहरूको लागि ठूलो मात्रामा सफल खाद्यन्नकोषको स्थापना गरे। यो कोषले स्थायीरूपमा भिक्षुहरूको लागि खाद्यन्नको सामाधान गर्यो र आजसम्म पनि मठलाई मद्दत भईरहेकोछ। यदि केन्सुर रिन्पोछे आज जिवित हुनुभएको भए के तिब्बतीयन अगुवाहरूले उहाँलाई पनि सोही खाले अपमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्थे? किनभने उहाँले जिवित रहनुन्जेल कहिले पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न छाड्नुभएन।
मेरो परिवारले झन्डै २० वर्षसम्म गादेन मठका भिक्षुहरूलाई समर्थन गरेको छ। यहाँ देखिएका मेरा काकी, काका, हजरबुबा र केही साथीहरू यहाँ गादेन सहारत्से र गादेन जाङ्गसे कलेजका भिक्षुहरूसँग।
अहिले मलाई लाग्छ कि मैले तिब्बतीयन नेतृत्वको समर्थन छोड्नु न्यायपूर्ण देखिएको छ। किनभने मेरो परिवार र मैले तिब्बती समुदायको लागि लगभग दुई दशक सहयोग गर्दा समेत हामीलाई नराम्रो व्यवहार गरियो। यो कुराले फरक पार्दैन कि तपाईंले कति र कति पटक दिनुभयो जब तपाईंले तिब्बतीयन नेतृत्वको लागि आफ्नो आर्थिक उपयोगीता पूरा गर्नुहुन्छ, तपाईं धर्मशालामा बस्न सक्षम हुनुहुँदैन। कम्तीमा, हामीले त्यस्तो सोच्न बाध्य भएका छौँ किनभने प्रायोजकको(जिन्दक) रूपमा हामीलाई गरेको व्यवहार जहाँ हामीलाई अस्वीकार गरिन्छ तर हाम्रो प्रायोजनलाई स्वीकार गरिन्छ।
धन्न, यो गाथाले मलाई र अरू अभ्यासकर्ताहरूलाई हाम्रो मनोवेग र धनलाई निर्दिष्ट दिशातिर लैजान अवसर दिएको छ, र यो दोर्जे शुग्देनको अभ्यासको वृद्धि र वंशावली सावित भयो। त्यसको मतलव यो होईन कि हामी गैर शुग्देन मठहरूलाई प्रायोजन गर्न प्रतिकूल हुने छैनौँ। वास्तवमा हामी त्यसो गर्न खुशी हुनेछौँ यदि नेतृत्वहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रायोजकप्रति देखाऊने नराम्रो व्यवहारमा रोक लगाउँछन् भने। किन मैले समर्थन गर्ने, रकम उठाउने र समुदायकोतर्फबाट बोल्ने जसले मलाई चरम रूपमा नै अस्वीकार गर्ने, सताउने र नीचो देखाउने गर्छन् भने? किन मैले त्यस समदायलाई समर्थन गर्ने जो मेरा साथीहरूलाई होटेलमा बस्न दिन अस्वीकार गर्छन् र उनीहरूलाई मोतीका दानाहरू किन्नबाट बञ्चित गर्छन् जसले मठहरूको लागि लाखौँ रकम उठाएका थिए? किन त्यस समुदायलाई सहयोग गर्ने जहाँ नेतृत्वले गैर शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूलाई क्षमा दिन्छन्, उनीहरूलाई “फोहोरी” शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूभन्दा अलग देखाउन?
गादेन सहारत्से मठको पूजाघर संरक्षणको लागि रकम उठाउँदै। यो कोष सञ्चय कार्य, जुन यो २० वर्षभरि गरिएको मध्ये एक हो, १.११ लाख भारतीय रूपैयाँ बाड्ने लक्ष्य थियो।
विडम्बना यो छ कि म त्यही विश्वास मात्र अभ्यास गरिरहेको छु, जुन मलाई तिब्बतीयन समुदयका मेरा गुरहरूले सिकाएका थिए। यो त्यो अभ्यास हो जुन एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा पछिल्लो ४०० वर्षदेखि चलिआएको छ। तर तथ्य यो हो कि म तिब्बतीयन हैन र मलाई यस्तो व्यवहार सही राख्नु पर्दैन र जहाँ सम्म म सोच्दछु, म मेरो विश्वास आफैसँग राख्छु र मेरो पैसा र प्रयासहरूलाई अन्तै खर्चनेछु किनकी तिब्बतीयन नेतृत्व जसको लागि मैले विरोधको समर्थन गरे, मलाई यस्तो नराम्रो प्रकारले व्यवहार गरिरहेको छ।
दिनको अन्त्यमा, मेरो लामालाई धन्यवाद छ, म यो तथ्यलाई वेवास्ता गर्न सक्दिन कि भारतको मठहरूमा अझै पनि केही अभूत्पूर्व धार्मिक ठाउँहरू र अभ्यासकर्ताहरू छन्, धन्य मैले तिनीहरूमा विश्वास गर्न छोडोको छैन। तर त्यहाँ धार्मिक मानिसहरू र ठाउँ भएता पनि,यो कुरा नकार्न सकिदैंन जुन नेतृत्वप्रति उनीहरू आभारी छन् त्यसले पछल्लो २० वर्षमा धेरै अधार्मिक कार्यहरू गर्न बढुवा दिई रहेको छ र यी कार्य साँच्चै नै रोकिनुपर्छ।
यो कोष संचय कार्यमा रिन्पोछे र उनका विद्यार्थीहरूले मठको अस्पतालको लागि RM२९०,००० (४.३६ लाख भारू) उठाए। तिब्बतीयन नेतृत्वले उनीहरूको समुदायलाई गरेको यसप्रकारको सहयोगलाई कहिले पनि सराहना गर्ने छैन, तर बरू आफ्नो मान्छेहरूलाई शुग्देन अभ्यासकर्ताहरू र प्रायोजकहरूप्रति आक्रमण गर्न बढुवा दिन्छ। धन्यवाद स्वरूप, रिन्पोछे र अरू शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूलाई दुर्व्यवहार र भेदभाव गरिनेछ। वास्तवमा, शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूको रूपमा, रिन्पोछे र उनका विद्यार्थीहरूले त्यही अस्पताल जसको लागि हामीले रकम उठायौं त्यहाँ पनि उनीहरूले उपचार गर्न कहिले पनि दिनेछैनन्।
दोर्जे शुग्देनको प्रतिबन्धको चरम समय अगाडि, गादेन सहारत्से मठको एक बुढा भिक्षुको लागि मेडिकल उपचारको प्रायोजन गर्न आग्रह गरिदै। इमेलमा भएको साइन अफ याद गर्नुहोस्, मेरी आमा जसले वर्षभरि लाखौं रकम उठाउन मद्दत गर्नुभयो।
ऐसी छोदोनद्वारा मेरो वालमा राखेको सन्देश, जसले आफ्नो प्रोफाइलमा लेख्छिन् कि उनी केन्द्रीय तिब्बतीयन प्रशासनमा कार्यरत छिन्। के तिब्बतीयन नेतृत्वले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई यसरी नै प्रायोजकसँग बोल्न प्रोत्साहन गर्छन्?
मेरी आत्मिय आमापट्टीको हजुआमा र काकी (अहिले पादरी प्याट्सी) रिन्पोछेको लागि भेट चढाउँदै। यस्तो सार्वजनिक शिक्षाको समयमा, सबै रकमको केही भाग मठहरूलाई दान गरिन्छ।
मठहरूको लागि अत्यावश्यक रकम उठाउन, त्यो समयमा गरिएको कोष संचय कार्यहरू मध्येको एक, जुन समयमा हामी आफैसँग थोरै मात्र रकम थियो। रिन्पोछेका धेरै जसो अहिलेका विद्यार्थीहरूले यो रेस्टुरेन्ट चिन्दा पनि चिन्दैनन्, किनकी यो समारोह धेरै अघि राखिएको थियो।
गादेन मठका युवा भिक्षु पोसाक र मञ्जुश्रीको मूर्ति दान स्वरूप लिदै। मेरा लामा, परिवार र केचाराले ३००० पोसाक सेट र मूर्तीहरू गादेन मठका भिक्षुहरूलाई प्रदान गरे। तथापि, हामी दोर्जे शुग्देन अभ्यास गर्छौ भनेर, हामी जस्तो प्रायोजकलाई अपराधी नहुँदा पनि अपराधी झै व्यवहार गरिन्छ।
रिन्पोछेको साथमा बोधगयाको रूट संस्थामा लामा सोङ्गखापा र छोराहरूको मूर्ति सेट दान गर्दै। फेरि पनि अर्को ठाउँ जहाँ हामीलाई अब स्वागत छैन, तैपनि हाम्रो दान गरिएको मूर्तिहरू अझै पनि उनीहरूको मूल वेदीमा राखिएको छ।
सार्वजनिक धम्की स्वरूप गैर शुग्देन व्यक्तिद्वारा मलाई वि.च्याटमा पठाइएको सन्देशको अर्को उदाहरण। उनीहरूको मौनतासँगै तिब्बतीयन नेतृत्वले यस्ता व्यवहार र प्रायोजकप्रतिको व्यवहारलाई क्षमा दिइरहेको छ।
तिब्बतीयन कारणहरूका लागि गरिएको विरोध समारोहमा भेटिएका भूतपूर्व साथीद्वारा शालीनताका साथ गरिएको टिप्पणी। यो दु:खदायक छ कि उसले मलाई मेरो संस्था छोड्न आग्रह ग-यो र मेरो लामालाई बेइमानीको संज्ञा दियो। मठहरू र गैर शुग्देन मानिसहरूले हामीलाई भूतको उपासक भनेर लान्छना लगाउँन् तर उनीहरू त्यही भूतको उपासकहरूले उठाएको रकम भने राख्छन्, के यो ईमान्दारीताको काम हो त?
अभद्र तरिकाले हालसालै मेरो वालमा राखिएको टिप्पणी। किनकी ल मानौँ म आतकंकारी प्रायोजक हुँ,त्यसको मतलव के मैले र मेरो परिवारले मठहरूको लागि उठाएको रकम स्वीकार्य स्रोतबाट छैन र के त्यो रकम हामीलाई फिर्ता आउछ त?
कोही व्यक्ति जो आफूलाई तिब्बतीयन नेतृत्वसँग निकै नजिकको भन्छन् उनीद्वारा मेरो वालमा राखिएको टिप्पणी। उनले टिप्पणी गर्न साथ पुन: हटाइन्, सायद उनले मैले पढोस् भन्ने चाहन्थिन् तर अरूहरूले गैर शुग्देन मानिसहरू कस्ता सम्म हुन्छन् भन्ने सत्य थाहा नपाउन् भन्ने चाहन्थिन्।
तिब्बतीयन समाजका अर्का सदस्यद्वारा गरिएको थप गाली। म सोच्छु किन गैर शुग्देन तिब्बतीयनहरू प्रायोजकहरूसँग यस्तो निकृष्ट बोली बोल्न उचित ठान्छन्, अर्कातिर तिब्बतीयन नेतृत्व यो कुरामा मौन छ।
तिब्बतीयन समाजका अर्का एक सदस्यद्वारा सताई रहेको।
युवा क्याब्जे त्रिजंग चोकत्रूल रिन्पोछे र अर्का युवा क्याब्जे सोङ्ग चोकत्रूल रिन्पोछेसँगै बसेर खाजा खाईरहेको फोटो पोष्ट गरेपछि, यस्तो प्रतिक्रिया मेरो वालमा राखिएको। के तिब्बतीयन नेतृत्वले आफ्ना मानिसहरूलाई लामाहरूको बारे यस्तै बोल्न प्रोत्साहन गर्छन् ?
1 लाई जवाफहरू कसरी तिब्बती नेतृत्वले प्रायोजकलाई व्यवहार गर्दछन् (जिन्दक)
शुभ मंगोलियन साइतहरू | Tsem Rinpoche on अगस्ट 14, 2019 at 5:58 अपराह्न
[…] कसरी तिब्बती नेतृत्वले प्रायोजकलाई व… […]
संयुक्त राज्य अमेरिका 6,178,234
युनाइटेड किंग्डम 834,167
संयुक्त अरब अमीरात 117,947
दक्षिण अफ्रिका 115,382